I-Raw Estradiol powder (50-28-2) hplc =98% | AASraw
/ iimveliso / AmaHormones aseTyhini / Estradiol powder Series / I-Estradiol powder
SKU: 50-28-2. iindidi: Estradiol powder Series, AmaHormones aseTyhini
I-AASraw ikunye kunye nokukwazi ukuvelisa kwigram ukuya kwinqanaba le-Estradiol powder (50-28-2), phantsi kolawulo lweCGMP kunye nokulawulwa kwekhwalithi ephezulu.
I-Estradiol yindlela ye-estrogen, i-hormone yesini esetyhini eyenziwa ngama-ovari. I-Estrogen iyimfuneko kwiinkqubo ezininzi emzimbeni. Eli nyanga li-hormone yabesifazane. Isetyenziswe ngabasetyhini ukunceda ukunciphisa iimpawu zokunqamuka kwesisu (ezifana nokutshisa okutshisa, ukumelela kwesisu). Ezi zimpawu zibangelwa ngumzimba okwenza i-estrogen encinane.
Estradiol powder ividiyo
I-Raw Estradiol powder ezisemqoka
Melt Point: 173 ku-179 ° C
Ukusetyenziswa kwe-Raw Estradiol kwipiliti ye-steroids
I-Estradiol (i-CAS 50-28-2) (i-E2), iphinda i-oestradiol, i-steroid, i-estrogen, kunye ne-hormone yesini esifazana.
Ukusetyenziswa kwePowderol powder
Thatha u-estradiol ngokulinganayo njengoko wawunikwe yona. Landela zonke izikhokelo kwiileyibrari yakho yesigunyaziso. Musa ukuthatha eli liyeza kumanani amakhulu okanye amancinci okanye ixesha elide kunconywayo.
Isilumkiso kwi-Raw Estradiol powder
Akufanele usebenzise i-estradiol ukuba unayo: isifo sesibindi, ukuphaphazeka kwegazi, ukuphuma kwegazi elingavamile, imbali yomdlavuza oxhomekeke kwi-hormone (njengengxube, uterine, ovarian, okanye umdlavuza we-thyroid), okanye ukuba uye wakha , ukubetha, okanye i-blood clot.
Imiyalelo ye powder e-Estradiol
Ezinye iziyobisi zingasebenzisana ne-estradiol, kubandakanywa nemithi kunye neyeza-counter-counter-counter, amavithamini kunye nemveliso yemveliso. Tshela ngamnye umboneleli wakho wezempilo malunga nawo onke amayeza owasebenzisa ngoku kunye naluphi na unyango oqalayo okanye uyeke ukusebenzisa.
Olu luhlu aluzalisekanga kwaye ezinye iziyobisi zingasebenzisana ne-estradiol. Tshela ugqirha wakho malunga nawo onke amayeza oyisebenzisayo. Oku kubandakanya i-prescription, i-over-counter-counter, i-vitamin, kunye nemveliso yemveliso. Ungaqali iyeza elitsha ngaphandle kokuxelela ugqirha wakho.
I-Estradiol Powder (i-CAS 50-28-2)
I-Raw Estradiol yokuThengisa iPowder
Indlela yokuthenga i-Estradiol powder (i-CAS 50-28-2) esuka kwi-AASraw
I-AAS eluhlaza ihlinzeka ubumsulwa 99% Estradiol powder oluhlaza ukuphuhliswa nokugcinwa kwamathambo okuzala abantwana.
I-Estradiol Raw Powder Recipes